Iingcebiso malunga noTshintsho kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo - Ulutsha Nesikolo
Ikrismesi Iincwadi Ne Iifilimu
Iingcebiso malunga noTshintsho kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo
Ukutshintsha ukusuka kwisikolo samabanga aphakamileyo kuye kwisikolo esiphakamileyo kunokuba nzima kulutsha. Isakhiwo esingaqhelekanga, ootitshala abatsha, abafundi abaninzi, kunye nolutsha oludala banokoyikisa. NgokweYunivesithi yaseCalifornia Inkqubo ye-ACCORD , abafundi abanotshintsho olunzima ukuya kwisikolo esiphakamileyo bahlala benesizathu esisezantsi, amabakala asezantsi, kunye nenqanaba eliphezulu lokuyeka isikolo. Nangona kunjalo, zininzi izinto onokuzenza wena, kunye nolutsha lwakho ukwenza olu tshintsho lube lula kwaye lube yimpumelelo.
Lindela iimvakalelo ezixubeneyo
Ulutsha oluninzi luyakuvuyela ukungena kumabanga aphakamileyo, utsho uphando ukusuka kwiKholeji yaseBrockport eNew York. Bajonge phambili ekubeni nenkululeko engakumbi kunye nokukhula, kunye nokukhetha ngakumbi kwiiklasi abazithathayo, imisebenzi abathatha inxaxheba kuyo kunye nabahlobo abanabo.
Iingcebiso zabafundi abasaPhakamileyo beZikolo eziPhakamileyo
Iingcebiso malunga nendlela yokuSinda kwiSikolo esiPhakathi
Iingcebiso ngeZakhono zeKholeji
Nangona kunjalo, kukho uloyiko. Abangenayo abatsha baxhalabile:
pranks ukwenza kunyoko
Ukufumana indlela yabo ejikeleze isakhiwo esikhulu
Ukuthathwa ngabafundi abadala
Ukuba baya kuba nakho ukuhlangabezana nokulindelwe okuphezulu kootitshala babo
Ukuba baya kuba nakho ukusingatha lonke uxanduva oluza kubakho kwisikolo esiphakamileyo
Ukuba neemvakalelo ezixubeneyo kuyinto eqhelekileyo. Ukujongana neemeko ezingaqhelekanga kunokubangela iimvakalelo ezahlukeneyo nakubani na. Kulutsha, ezi mvakalelo zinokuba namandla ngakumbi. Balindele ukuba bonwabe ngomzuzu omnye kwaye boyike olandelayo. Bakhuthaze ukuba bathethe kwaye baqiniseke ukuba bayamamela. Kukho izinto onokuzenza ukunceda ukunciphisa uxinzelelo lomntwana wakho ngaphambi kokuba isikolo siqale.
Ndwendwela iSikolo ngaphambi kokuba iiklasi ziqale
Uninzi lwezikolo eziphakamileyo ziya kuba nokuziqhelanisa nomntu omtsha apho umntu omtsha angaya esikolweni ngaphambi kokuba kuqale ngokusemthethweni isikolo. Iindaba zeU.S. kunye neNgxelo yeHlabathi icebisa ukuba uqiniseke ukuba wena mntwana uya kulo msitho. Ukwenza ishedyuli yeklasi yakhe kuya kumqinisekisa ukuba isakhiwo asidideki njengoko wayesoyika, ootitshala bakhe aboyiki ngendlela awayecinga ngayo, kwaye ezinye zexhala lakhe ziya kuyeka.
Khuthaza ubuhlobo kunye nabantwana abadala
Nangona abazali abaninzi besoyika ukuba ulutsha lwabo lunabahlobo abadala, uphando Ukusuka kwiKholeji yaseGeorgia kunye neDyunivesithi yaseburhulumenteni kunye neDyunivesithi yaseFlorida yeYunivesithi ibonisa ukuba abafundi bebanga lesibhozo abanabahlobo bezikolo zamabanga aphakamileyo banotshintsho olugudileyo ukuya kwisikolo samabanga aphakamileyo kwaye bafumane ulwazi malunga nesikolo esiphakamileyo.
luhlobo luni lwewayini ehamba nesalmon
Ukuba unomntwana okhulileyo, imeko yakho ilungile. Ukuba akunjalo, jonga ukuba ngaba ukhona umntwana okhulileyo kwindawo ohlala kuyo onokuthi afune ukuthetha nomntwana wakho. Unokufumanisa ukuba incoko yenza ukuba umntwana wakho akhululeke ngakumbi malunga nengcinga yokungena kwisikolo samabanga aphakamileyo.
Khuthaza ubudlelwane kunye nootitshala
Nangona umntwana wakho okwishumi elivisayo enokuziva ngathi kwakha ubudlelwane kunye nootitshala kuyinto engathandekiyo, iprojekthi edibeneyo yophando eyenziwe ziikholeji nakwimfundo yamabanga aphantsi eBritish Columbia ibonisa ukuba ubudlelwane obuhle nootitshala bongeze utshintsho olugudileyo ukuya kwisikolo samabanga aphakamileyo. Ootitshala abanakho ukubonelela ngenkxaso hayi kwizifundiswa kuphela, kodwa banakho ukubonelela ngenkxaso kwezentlalo kunye neengcebiso.
Ootitshala bakhona yonke imihla kwaye bayazi ngakumbi malunga nokwenzekayo esikolweni kunokuba abafundi abaninzi becinga. Ootitshala banokuba ngumthombo omkhulu wenkxaso kumntu omtsha oziva nje ekhululekile. Khuthaza umntwana wakho ukuba akhe ubudlelwane kunye notitshala okanye ababini, ngokuthetha nootitshala ngaphambi okanye emva kweklasi kwaye uye kwabo titshala ukuba unengxaki okanye unombuzo.
Khuthaza ukubandakanyeka kwimisebenzi yangaphandle
Imisebenzi eyenziwa emva kweeyure zineentlobo ngeentlobo zezibonelelo, njengoko kubonisiwe kuphando olufanayo ziingcali zaseBritish Columbia. Abantwana ababandakanyeka kwimisebenzi yangaphandle bayaziqhayisa ngokubulawa kwezibonelelo ezilungileyo kubandakanya:
Ukusebenza okungcono kwezifundo
Ulwalamano olungcono kwezentlalo
Kunqabile ukuba uphume phakathi
Jonga abantu abadala ngakumbi
Yiba neqhina elomeleleyo esikolweni
Ngokusisiseko, ukuthatha inxaxheba kwizinto zangaphandle kuya kukhuthaza ubudlelwane nootitshala-kuba uninzi lwabaqeqeshi kunye neenkokheli zeeklabhu ngootitshala-kwaye yonyusa ukunamathela esikolweni. Zonke izibonelelo zemisebenzi yangaphandle ziyakwenza lula utshintsho kwisikolo esiphakamileyo. Jonga yonke imisebenzi enokwenzeka kunye nomntwana wakho okwishumi elivisayo. Mkhuthaze ukuba afumane imisebenzi anomdla kuyo. Mncede ukuba abone ukuba kufuneka enze ntoni na ukuze azibandakanye. Ngaba kufuneka azame okanye abhalise nje? Qiniseka ukuba akazibandakanyi nezinto ezininzi ngexesha elinye.
yintoni intsingiselo yokuvela kwekhadinali
Bandakanyeka kwaye Hlala ubandakanyeka
Akukho nto wena, njengomzali, onokuyenza ukunceda umntwana wakho esikolweni ngaphezu kokuzibandakanya nokuhlala uzibandakanya kwimfundo yakhe. Ngokwe- Isithili sesikolo iPalo Alto oku kubandakanya:
Ukuya kulwazi olutsha
Ukudibana nootitshala bakhe kunye nokufumanisa ukuba balindeleni
Ukujonga iwebhusayithi yomsebenzi wasekhaya yonke imihla ukuqinisekisa ukuba umsebenzi wesikolo ugqityiwe
Ukufumanisa ukuba zeziphi iinkonzo (umz. Ukucebisa, ukufundisa, ukucebisa) ezikhoyo esikolweni sakhe, kwimeko apho angaze azidinge khona
Ukuya kwiinkomfa zabazali nootitshala, nokuba uqhuba kakuhle
Ukuthetha nomntwana wakho malunga nesikolo
Ebonisa umdla kwimisebenzi yakhe
Ukuya kwimidlalo yakhe okanye kwezinye izinto ezenziwayo zangaphandle
Okona kubaluleke kakhulu, mamela umntwana wakho kwaye ujonge naziphi na iimpawu zoxinzelelo. Musa ukuvumela izinto zihambe. Ukuba ukrokrela ukuba kukho into engahambi kakuhle, thetha naye.
Incwadi eblue kelley isebenzise amaxabiso emoto akudala
Bancede bafunde ukuLawulwa kwexesha
Ngemisebenzi emininzi kunye nomsebenzi wesikolo owenzelwa ekhaya, kunokubakho uxinzelelo ngakumbi kunye nokunokwenzeka kwempazamo. Izakhono zolawulo lwexesha zibalulekile kwisikolo esiphakamileyo, kodwa ulutsha alukafundi ezi zakhono okwangoku. Xa kuziwa kulawulo lwexesha, ubungakanani obulodwa abuhambelani konke. Ngokwengcali yezifo zangaphambili kunye neengcali zootitshala besikolo esiphakamileyo sangoku Glencoe , Mncede afumane inkqubo emsebenzelayo. Ngaba ufuna umcwangcisi omnye ukuba abhale yonke into okanye izicwangciso ezininzi zokugcina imisebenzi ihlukile? Ngaba ungcono ngekhalenda kwifowuni yakhe apho anokuseta khona ii-alamu zokumkhumbuza ngeziganeko ezibalulekileyo kunye nexesha elibekiweyo? Mfundise izinto ezinje:
Ngalo lonke ixesha cwangcisa ixesha elongezelelekileyo lokugqiba umsebenzi wesikolo owenzelwa ekhaya, kwimeko apho kungathatha ixesha elide kunokuba ucinga
Yenza owona msebenzi unzima kakhulu, okanye ubuncinci, xa enamandla amakhulu kunye noxinzelelo
Yahlula iinjongo ezinkulu kwiinjongo ezincinci ukuze angoyiki
Funda kancinci yonke imihla ukuze angalindi de kube ngumzuzu wokugqibela
Ukuzivuza ngokwenza kwakhe umsebenzi phambi kokudlala
Yiba neefolda ezahlukeneyo okanye izibophelelo kwisifundo ngasinye
Lungiselela izixhobo ngobusuku obungaphambi kokuba iintsasa zakhe zingangxami
Yiba nolindelo oluphezulu
Uphando Ukusuka kwiYunivesithi yaseHarvard ibonisa ukuba ulindele ukuba umntwana wakho aphumelele, kunokwenzeka ukuba enze njalo. Abazali abanolindelo oluphezulu, banxibelelana ngokucacileyo nolindelo, kwaye bakhuthaze ulutsha lwabo ukuba luhlangabezane nolindelo bahlala benolutsha olukhuthazekileyo kwaye lufezekisa ngakumbi kwizifundo. Kukwanokwenzeka ukuba baye kwikholeji kwaye bathambekele ekubeni nezakhono zokusombulula iingxaki ngakumbi kunontanga yabo.
Ukuba uvumela umntwana wakho ukuba akholwe ukuba angadlula kolu tshintsho lunokuba nzima ngempumelelo, uya kuthi. Ukuba umazisa ukuba ulindele ukuba enze kakuhle esikolweni, uya kwenza njalo. Ukuba umazisa ukuba ulindele ukuba aye kwikholeji, uya kuthi.
Isikolo samabanga aphakamileyo sinokuba ngamava amangalisayo
Nangona utshintsho ukusuka kwisikolo samabanga aphakamileyo luye kwisikolo esiphakamileyo kunokuba nzima, akufuneki ukuba lube buhlungu. Ngokulungiselela kunye nenkxaso, umntwana wakho okwishumi elivisayo unokuhamba ngempumelelo kwaye ngokuqinisekileyo, esomeleza iimvakalelo zakhe malunga nesikolo sakhe. Nje ukuba utshintsho luphelile, umntwana wakho unokufumana nje ukuba isikolo esiphakamileyo ngamava amangalisayo azele ngamathuba amnandi, amatsha.
Baby Clothes Khuphela Music Ukuthandana Izixhobo Abantwana Abasakhasayo Eyabantu Iintetho
Ngaphakathi Design Styles
iimpawu zenja ebulawa ngumhlaza
uyicela njani ikhefu lokufelwa
Kufuneka ulinde ixesha elingakanani ukunika isithembiso isangqa
indlela yokuphendula ndiyakuthanda
indlela yokuxela ithamsanqa ngokudlala amakhadi
Imibongo ngokubaluleka kosapho
Ingcebiso Kwi-Online Relationships